Tag: maalgashi | Martech Zone
Ganacsatada waaweyn waxay ku raaxaystaan ​​ka hadalka ku noqoshada maalgashiga. Shalay, waxaan kaqeyb galay kulan aan laqaatay shirkad guryaha dhista oo caqabado qaar kala kulantay xeeladooda webka Bogooda warbixineed ma wadin jihooyin aad u tiro badan waxayna ku qarashgareynayeen xoogaa lacag ah dhowr barnaamijyo dibadeed ah si ay ugu kexeeyaan dariiqyada meerahooda iibka. Dhibaatada aan aqoonsanay waxay ahayd inay bixinayeen dhamaan shirkadahaas si ay ula tartamaan
Maalgeli Dadka. Adiga ma lagu kala diri doonaa.
Sabtida, Juun 1, 2006 Saturday, April 16, 2016 Douglas Karr
Waxaan kula kaftamay dad aad u tiro yar tan iyo markii aan furay (iyo kala diridii ku xigtay ee hantidaydii adduun oo dhan), waxaan ku qaatay 5-tii sano ee ugu dambaysay maalgashiga dadka. Taasi waxay umuuqan kartaa wax aad loola yaabo, waxaana rajeynayaa inaanay danaysi ahayn, laakiin waxaan dareemayaa inaan diirada saarayo lataliyeyaasha, asxaabta, iyo qoyska - inaan ku noolaan doono nolol aad u badan oo miro dhal ah. Saaxiibkey, Troy, ayaa xalay i weydiiyay waxa ay tahay waxaas